Nhau Blog yeIndi Tagged "Vanhu" - THE INDIAN FACE
10 zvinhu iwe zvausingazive nezve Laia Sanz: Ngano yeTrial, enduro uye rally
Midhudhudhu ndeyevakomana chete here? Laia sanz, inoparadza kutenda uku nekukunda kushanu mumakwikwi epasi rose e enduro uye kunyange kuhwina mujaho uko vaimupikisa vaive vese varume. Speed ​​uye adrenaline inomhanyisa kuburikidza neropa rake uye hapana muganho kana chipingamupinyi chakanakira izvi Spanish. Uri kuenda kupotsa nhoroondo yayo?
10 curiosities nezve Tony Hawk: Skate pane yayo yakanakisa
Ollie 540? Kana iwe uchiziva zvatiri kutaura nezvazvo, iwe unozoziva kuti chinyorwa chedu ndechei nhasi: Iyo Skate Legend Tony Hawk. Uye hazvigoneke kuti usazive kumeso kwake apo, pamusoro pezvemitambo yake, ave mutambi wenhau, uyo akatogadzira rakewo mutambo wevhidhiyo kuti mitambo yake yemitambo igare. kuita mutserendende muchando munhoroondo, muchidimbu: shasha.
Zvinhu gumi Zvaungasaziva Nezve Nadia Comăneci: Artistic Gymnastics Star
Nguva dzose neuta hwake hwakatsvuka hwakasarudzika, chii chaive chiratidzo uye ane tarenda ane makore gumi nemana musikana wekuRomania aive akavanda kuseri kwekunyemwerera kwake kwekunyara? Nadia Comăneci ichave iri ngano kune iyo jimunasitikisi world mushure mekuwana akakwana gumi muMontreal. Kutiza hutongi hwechiKomonisiti hwe Romania uye kugadzirisa muUS uyu jimunasiti nhasi muenzaniso wekutsungirira uye kukwana kukwana kwakakodzera kuyemurwa.
10 zvinhu iwe ungangodaro usina kuziva nezva Ángel Nieto
Ngirozi Nieto, kubudirira uye kuenda kwemutambi mukuru uyu kwaive kusetsa. Kutenda mashura nenhamba yegumi nenhatu, yaive kunyange iyo nhamba yekukunda iyo yaakawana semhare shasha yemudhudhudhu, muhupenyu hwake hwehunyanzvi, mukurumbira 12 + 1. Iye uyo akazadza nekukunda España, ndiye protagonist weposvo yedu nhasi.
10 zvinhu iwe zvausingazive nezvaLea Michele
Lea Michele. Uyu mutambi wemuAmerican uyo akazozivikanwa nekuda kwebasa rake rine mukurumbira mu Glee, zvaive zvakare nekuda kwetarenda rake remitambo uye makuru matanho senge Broadway. Nekudaro, zvinonyadzisa nezvehunhu hwake zvakamubhadharira dambudziko mubhizinesi rekuratidzira. Iwe unoda kuziva zvakawanda nezve izvi gakava mhizha?
10 zvinhu nezvePerico Delgado iwe yaungangodaro usina kuziva.
"Ini ndaive mutambi wemufirimu, ndakafadza vanhu" uyezve, kana iye anokunda iyo Tour de France 1988 yakapa chinjana che360º kuchovha kuSpain. 'Mutete Parakeet' Kune wese munhu, 'Pedro' yezviri kuitika, anga ari mumwe wevanonyanya kuchovha bhasikoro nyika yakamboona. Perico Delgado, anorwara mukomana akakwanisa kupfekedza vaviri Vueltas España uye Tour de France: Precursor we Spanish Kuchovha.
Zvinhu gumi zvaungasaziva nezve Mutambi Jesse Owens.
Iyo nyaya kuseri kwe vatambi vakuru Ivo vanowanzo kutikurudzira mune chero nzvimbo yehupenyu hwedu. Iko kugona kune vanhu kuti vakunde miganho uye mamiriro ezvinhu kana isu tichida kutevera chishuwo chedu hachienzanisike kukosha. Uye muenzaniso uri nani pane Jesse Owens, Hapana: "Usatarise divi, ita semabhiza, anomhanya chete". Verenga iyi nyaya, inoshamisa.
Zvinhu gumi nezvaCarlos Sainz Jr. zvaunofanira kuziva
Kuva mwanakomana wa'El Matador 'kunofanirwa kuunza nebasa rakakura kwazvo, asi mumhanyi uyu anoziva nzira yekuveza hunhu hwake, achipa chikwereti chakazara kune tarenda rake rekumhanya nekuzadza Spain nekudada mu Fomula 1. Tinotaura nezvazvo Carlos Sainz Jr. Wanga uchiziva here kuti chikuru chidhori chake achiri mudiki aive Fernando Alonso? Uye ikozvino, vanokwikwidza pamwechete uye ishamwari huru.
10 zvinhu iwe zvausingazive nezve Usain Bolt: Anomhanyisa murume munyika.
Hechino chakavanzika chemurume anomhanyisa pasi rese, horaiti, isu tinongokupai mashoma mazano. Kururamisa mamiriro, 92% simba rekurova mhepo, makumi mana nematanho uye scoliosis. Ehe ... zvinonzwika otherworldly, asi Usain Bolt akashandisa kushomeka kwake sechishandiso chake chakanakisa uye akapa nyika mutambo wekumhanya unoita kunge chimwe chinhu chiri mufirimu reMarvel.
10 zvinhu nezve Tiger Woods iwe unofanirwa kuziva
Kumuka nekudonha kwechifananidzo. Nhoroondo yeiyi huru ye gorofu Akasvibiswa neyakaipirwa ega ayo asina kuenda asina kuzivikanwa muhupenyu hwake hwehunyanzvi. Nekudaro, tarenda uye kutsungirira kwemutambi uyu zvakaita kuti tirege kukanganwa rwendo rwake, ndoda zita rake: Tiger Woods.
Zvinhu gumi Nezve Jon Rahm: Iyo Yakanyanya Spanish Golfer
"Kugara, kuora uye maitiro" Ndiwo mashiripiti fomura yeBasque iyi kuzadzisa zvibodzwa zvake zvemitambo. Jon Rahm ane zvikonzero zvakawanda zvekuita kuti maSpanish adade. Maitiro ake kwaari gorofu uye kugona kwake kwehunyanzvi kumumisa iye seimwe yeakanakisa nhoroondo yegoroferi yakamboona. Wakatonzwa nezvake here? Mushure meichi chinyorwa, zita rake rinobva rajairira kwauri.
10 zvinhu iwe zvawaisaziva nezve Ashton Kutcher
Zvinogoneka kuti kuratidzwa kwako kwaSteve Jobs mu'Mabasa 'kwakakupa pfungwa yekuzvinyudza muhunyanzvi sosi yekugadzirisa mhinduro dzevanhu. Chokwadi ndechekuti Ashton Kutcher; mutambi, modhi uye investor, apa nhanho padivi pevaraidzo kugadzirisa nyaya dzemagariro uye nekukonzera kwakadzika. Wanga uchiziva here kuti ane hwaro hunorwisa kubiridzirwa kwevanhu?
Zvinhu gumi zvausina kuziva nezvaJesu Calleja: Mufambi weSpain
"Kana iwe usingade hupenyu hwako! Chinja!" Uye hongu anotiudza Jesu Calleja, imhaka yekuti rinofanirwa kuve zano rakanaka. Uyu mushanyi ndi free spirit zviri pamutemo. Kuda kwake uye kuda kwake makomo zvakamupa iye kubudirira kukuru muhupenyu hwake hwehunyanzvi uye hwega. español uye connoisseur wemakona ari kure kwazvo epasirese, haazive miganho kunze kweiyo yatinozviisa isu pachedu.
10 zvinhu nezveDulceida iwe yaungangodaro usina kuziva
Mambokadzi wemafashoni nemasocial network. Kana chimwe chinhu icho Dulceida iyo yatidzidzisa ndeyekuti rudo runogona kukunda kutya. Mukadzi akaita yake yekuzvivaraidza: fashoni, humambo hwake uye maratidziro shamwari yake yepamusoro. Isu tinokuudza imwe yeakanyanya kukodzera data reizvi fashoni blogger iyo yakapinda pasocial network yese.
1 2 3 4 Zvadaro